Hala-bato mibaribary : Misy andian’olona karamaina hifidy -
AccueilRaharaham-pirenenaHala-bato mibaribary : Misy andian’olona karamaina hifidy
18/12/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Manao ny fomba rehetra entina hangalaram-bato ny kandidà iray, izay nihevitra ny ho lany tamin’ ny fifidianana dingana voalohany. Omaly dia namboraka io zava-misy io, ireo andian’olona nanatanteraka ny hala-bato tamin’ ny fifidianana dingana voalohany teo. Kara-pifidianana tsy misy maka eny amin’ny fokontany no ampiasain’izy ireo amin’ izany, satria tsy misy ny sakantsakana noho ny fiaraha-miasa amin’ ny lehiben’ ny fokontany sy ny mambran’ny biraom-pifidianana.
Taorian’ ny fanambarana nentin’ ny talen’ny tranom-printim-pirenena omaly, mikasika ny fihoaran’ny famandrihana natao tamin’ ny kara-pifidianana sy kara-panondro. Mibaribary izao fa tena ampiasaina amin’ny hala-bato izy ireny, satria nivoaka tamin’ ny fahanginany ireo olona karamaina hifidy hitondra ireo kara-panondro sy kara-pifidianana ireo. Izany hoe ireo karatra tsy misy maka eny amin’ny fokontany no ampiasaina amin’izany, ka mifidy tsy misy sakantsakana ireo olona mitondra ireo kara-pifidianana sandoka ireo. Raha ny fanazavan’izy ireo dia telo alina Ariary ny karama, ary efa misy ny fiaraha-miasa amin’ ny lehiben’ ny fokontany sy ny mambran’ny biraom-pifidianana. Marihina fa ireo andian’olona izay nanao io asa fangalaram-bato tamin’ ny fifidianana dingana voalohany, ireto namboraka ny marina ireto. Tonga saina izy ireo fa halatra, ary tsy hitondra soa ho an’ ny firenena ny zava-misy tahaka izany, ka manaitra ny tompon’andraikitra izy ireo. Raha ny fanangonam-baovao tamin’ireto andian’ olona ireto ihany no lazaina, dia fantatra fa mahatratra hatrany amin’ ny 400 000 any ho any ireo kara-pifidianana hifamezivezen’izy ireo manerana ny biraom-pifidianana. Izany hoe ireo olona ireo ihany no mifamezivezy mandatsa-bato amin’ ny birao fandatsaham-bato manodidina, saingy ny kara-pifidianana kosa no miova. Mazava moa izany fa tsy misy ny fitakiana kara-panondro, noho ny efa fisian’ny fifanarahana amin’ny biraom-pokontany sy ny mambran’ny biraom-pifidianana.
Tsy mahagaga ny zava-misy tahaka izao satria dia maro ireo olom-pirenena tsy taitra amin’ny fakana ny kara-pifidianana, ary ankoatra izay ireo olona efa maty sy ny anarana miverin-droa, izay namoahana kara-pifidianana ihany koa. Mba ahafahana mitondra porofo amin’ izay kara-pifidianana tsy misy paka eny amin’ ny fokontany, ho an’ ny fokotany etsy Ankasina izay nanaovana fanadihadiana dia mahatratra 800 ireo karatra tsy misy maka. Izany hoe raha tsy misy ny fandraisana fepetra, dia mety hisy hampiasa indray izany ireo karatra ireo. Efa fantatra rahateo anefa ny tompon’ antoka amin’ ny fangalaram-bato tahaka izao, ary efa nambaran’ireo andian’olona ireo ihany koa izany. Ireo zava-misy ireo raha teo izay tsy mahagaga, indrindra tafiditra anatin’ ny fangalaram-bato ny lehiben’ ny fokontany. Ilay kandidà nandritra ny adihevitra ny alahady teo tao amin’ ny TVM sy ny RNM, dia efa nilaza fa nihaona tamin’ireo lehiben’ny fokontany. Nanome vahana ireo sefo fokontany rahateo io kandidà io tamin’izany. Nandritra ny resaka nifanaovana tamin’ny tompon’andraikitra iray misahana ny raharaha ambony eo anivon’ny fitantanana ny firenena aza, dia nambarany fa ny 80% ny lehiben’ny fokotany manerana an’i Madagasikara dia efa voaresak’io kandidà io, ary aorian’ ny fifidianana ny tambiny. Ny mahagaga anatin’ izao tranga izao, dia tsy hita ny fiarahamonim-pirenena mandray ny andraikiny sy mizaha ifotony ny tena zava-misy marina.
Fihaonambem-paritry ny HVM : Mpizaika 10.000 hikaon-doha ao Toliara